I-demokrasi ngqo ngqo isinqumleli esivela ekuvaleni nasekubuyiselweni koqoqosho: Martin Vrijland
Nqamleza idemokhrasi indlela emfutshane esuka ekuvaleni nasekuvuseleleni uqoqosho
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Meyi 2020	• 24 Comments
Idemokhrasi ethe ngqo sisisombululo esisiso sokurhwaxwa nguRhulumente wase-Datshi ilizwe lethu. Luhlobo lwedemokhrasi apho abantu bonyula ngokuthe ngqo abameli babo kwi-Intanethi (ekhuselekileyo) yokuvota. Abantu abanolwakhiwo ngokutsha kunye neempawu zobunkokeli bavotelwa. Umntu oneevoti ezininzi uphumelela isikhundla sobuphathiswa. Okufanayo kuya kwinkulumbuso.
Imithetho kufuneka ihlaziywe kwaye ingeniswe ebantwini kwisigama esicacileyo esilula sokuvuma okanye ukungavunyelwa. Umthetho unikwa umhla wokuphelelwa kwaye unokuvotelwa ngaphandle okanye ukuvuselelwa ngokuzenzekelayo xa loo mhla uphela. Umthetho olungileyo uhlala. Umthetho olubi uyanyamalala.
Ungayakha idemokhrasi ethe ngqo ngelixa urhulumente okhoyo eselapho. Luhlobo oluqinisekileyo lokuxhathisa olunokuba ikhonkrithi kwangoko. Uhlaselo oluzolileyo nolukhawulezayo. Awulindi unyulo, kodwa ulungiselele unyulo lwakho ngqo kwi-Intanethi.
Inokuba ikhonkrithi kwangoko, kuba ugcina izakhiwo ezikhoyo zingasebenzi, kodwa zithathe indawo yeenkokeli ngokuvota kwi-intanethi. Iipuzzle zesithsaba zithathelwa indawo ngabaphathi babantu.
Iinkqubo zokuvota ezibonelela ngokhuseleko kwaye ezinokulawula unyulo lwabagqatswa zikhona. Kuya kuba yinto efanelekileyo ukwenza oku nge-blockchain okanye ngekhonkco kwi-DigiD yakho, kodwa ngenxa yokuba akufanele silindele ukuba urhulumente osebenzayo angabinakho ukusebenzisana, sinako ukuzicwangcisa ngokwakho. I-FVVD sele inika iqonga loku (www.fvdd.nl).
Le leta ingezantsi ichaza ngokweenkcukacha kwaye yileta emxinwa onokuyithumela ngokuthe ngqo kubahlobo bakho okanye kubantu obaziyo:
Ngamafutshane ngorhulumente okhoyo kunye “nokuvalelwa kwengqondo okuphucukileyo” esithethe ngayo.
Ngokuthe ngcembe, kwindawo yam, abantu abaninzi bayaqala ukubona ukuba urhulumente ufuna ukutshintsha uluntu luphela. Oko "kukukhiya okrelekrele" kuya kuhamba kancinci kuguqulwe kube yinto esisigxina, apho kuya kufuneka uyithenge kwakhona inkululeko yakho. Into eqhelekileyo iba yimitha nesiqingatha soluntu kwaye kuya kufuneka uzihlawulele ngokwakho. Ndidiniwe yiyo.
Mamela, iinkampani ngoku zinokuqesha abacebisi ababizayo ukufumana ingcebiso ngendlela yokuseta ishishini labo ngeenyawo ezintandathu. Ubheja kukho ithegi yexabiso elixhonywe kuloo; ithegi yexabiso lenkampani (kuba iya kudinga ukuvunywa ngokusemthethweni kwemilinganiselo ye-1,5 yeemitha) kunye nethegi yomthengi (ngenxa yokuba omnye umntu kuya kufuneka ekhohle kangangemitha enye enesiqingatha kunye nokwehla komvuzo).
Kungenzeka ukuba isitofu sokugonya se-covid-19 siya kuba sisinyanzelo. Ucinga ntoni ngaloo nto?
Ucinga ntoni ... Ngaphandle kombuzo wokuba ingaba isitofu sokugonya sivavanywe ngokwaneleyo na, kwaye ngokulinganayo ngaphandle kombuzo wokuba ngaba sifuna eso sixhobo esinye seemitha ezinesiqingatha kuluntu. Ndicinga ukuba uRutte akanantlonelo kwaye abaphulaphuli kakuhle kubantu abaqhankqalaza apho e-Hague.
Andazi ukuba ucinga ntoni ngayo, kodwa iteknoloji iya kusetyenziselwa ukubeka iliso kuwo onke la manyathelo. Obu buchwephesha kunye nedatha enkulu iya kuza nje, kuba zininzi kakhulu iinkampani ezinokufumana i-nibble enomdla kwakhona. Okanye ngaba ubona ngokwahlukileyo? Ndicinga ukuba abantu abaninzi sele besebenzela iinkampani ezinkulu ezibonelela ngezisombululo ze-ICT okanye iiarhente zikarhulumente eziqinisekisa ukuba bangaqhubeka nokuhlawula ikhaya labo kwaye balondoloze usapho lwabo. Abo bantu banokubona ukuba into ayilunganga, kodwa xa kuziwa ekukhetheni, uninzi lwabantu luzikhethela eyabo indlu negadi.
Mna nawe sazi ngokwenyani ukuba le ndawo intsha izakukhangeleka injani. Amajelo osasazo kunye noRhulumente bayaqhubeka bekholelwa ukuba ukuthengisa kuyafuneka kwaye indlela eyaziswa ngayo inyathelo ngamanyathelo, ukuze abantu baqhubeke nokukholelwa ukuba kunyanzelekile ukuba ibenayo intsholongwane ye-corona. Ayindonwabisi.
Ngaba nguwe owatsho oko? Ukuba inkqubo iqhubeke ngeentshukumo zamaza ukusuka 'ekuqiniseni ibhanti' ukuya kuthi ga nje kwi-reins entwasahlobo 'emva koko kuza umaza olandelayo. Emva kwethuba lokuqhelana nemitha enye enesiqingatha kunye nendawo encinci yokuqhuba, amajelo eendaba, iingcali (ukuveliswa kwamanani e-RIVM) kunye nabezopolitiko baya kusibonisa ukuvuselela intsholongwane ye-corona, emva kokungeniswa kwecandelo elilandelayo iphakheji izakwamkelwa ngabantu.
Ewe, andikhumbuli ukuba utshilo, kodwa abantu abaninzi ngakumbi bafumana ulwazi malunga nendlela esidlalwa ngayo (ngaphandle kwazo zonke iindaba ezingeyonyani). Singafumanisa okuninzi malunga nokuba kuyingozi kangakanani na isitofu sokugonya, indlela patent Microsoft efuna ukusinika isitifiketi sogonyo yedijithali, indlela uBill Gates otyala imali ngayo kwimveliso yeendaba kunye nogonyo, ukuba iinkqubo zingasetyenziswa njani ukusibeka esweni. Ndicinga ukuba ngokukhawuleza sityhalelwa kwinkqubo yolawulo lwedijithali iyonke. Ndicinga ukuba olu lwazi lubaluleke kakhulu, kuba ukuba awuyazi ingozi ekuleya, awuzukutsiba ecaleni. Nangona kunjalo, kufuneka kubekho inyathelo elilandelayo. Kufuneka size nezisombululo.
Ndicinga ukuba mna nawe asenzanga nto, siya kufudukela kwindawo apho kungekho mali ingaphezulu, uluntu apho iinkqubo, iikhamera kunye nedatha enkulu zisazi ngqo apho sikhoyo okanye sinalo iqondo lobushushu elifanelekileyo (akukho covid-19) kwaye sonke sinxibelelana nabani. Inyathelo elilandelayo kukudibanisa yonke le datha kunye nohlobo lwenkqubo yamanqaku. Andilindelanga loo nto, andibi kunjalo? Ngamanqaku okanye awenamanqaku awaneleyo, unokuya okanye ungahambi phandle, ngololiwe okanye ngenqwelomoya okanye okunye okunje. Oko kuya kuba ngumdenge! Ikhonkco layo yonke loo datha ukuya kumanqaku edijithali kunye nekhonkco kwibhanki yakho yedijithali kumnandi. Uhlobo lwentolongo evulekile.
Ndicinga ukuba siqhutywa kwiwebhu, kwaye i-China ibonelela ngomzekelo wokuba njengelizwe ungabanyanzela kanjani abantu ukuba bayithobele. Andifuni kuhlala eTshayina. I-China ikwabonisa indlela umntu omi kuyo ngokuchaseneyo ashiywe nje ngaphandle. Esi sisiphumo esizenzekelayo senkqubo enjalo. Okanye ngaba ubona ngokwahlukileyo? Ekugqibeleni, abantu abaninzi baya kuqubuda kuyo kwakhona, ngokuyinxenye kuba uninzi kuluntu ngokwalo lisebenzela iinxalenye zenkqubo 'yenkqubo'. Ukuba unomsebenzi kwi-IT kwaye ubonelela ngesoftware yedatha okanye unikezela ngeenkqubo zekhamera, ukuba usebenza njengegosa eliphandayo okanye njengepolisa, usayikhetha umvuzo wakho. Nantso indlela ehamba ngayo.
Kutshanje umntu uthe: "Ke ndiyilahla i-smartphone yam ukuze ndiphume kwinkqubo". Kodwa siya kwixesha apho inxaxheba eluntwini iba yinto engenakwenzeka ngaphandle kwe-digiD okanye ngaphandle kwe-eHerkenning (kwiinkampani). Sele injalo imeko. Kuya kwenzeka okufanayo nangetekhnoloji entsha yekorona. Ukuba uyilahlile i-smartphone yakho, awuyi kuphinda ukwazi ukungena esitolo. Emva koko uyi-spool.
Ngaba ucinga ukuba iya kuza kule nto? Ndicinga njalo ... Kwaye ke ungasinda kuphela ukuba unayo eyakho igadi eyabelweyo, kodwa ke kuya kufuneka ufumane nembewu yakho kuyo, kuba ukuzanelisa kwakho kuya kuvumeleka nakwixesha elide. Ewe, andazi ngawe, kodwa andinaxesha lale nto kwaye andiziva ngathi.
Ndicinga ukuba inyathelo elilandelayo liza kuba kukuba akusafuneki ukuba ube kwiindawo zikawonkewonke ukuba awuzange ugonyo. Kwaye loo "datha inkulu" iya kudlala indima koku. Ukuba iapp enjalo ithi emva kwexesha usifumene isitofu sokugonya, isango lokungena esitolo liza kukuvumela ukuba ungene; ngaphandle koko. Kwinqanaba lokugqibela, usetyenziso olunje luya kuthi lutshintshelwe uphawu lwedijithali oludityaniswe nomzimba wakho okanye into ethile. Andazi, uyiva ukuba iMicrosoft isebenza kuloo nto ipatent okanye into (ayisi iyelenqe, ndifunda kwi-patent kaGoogle). Kwaye iya kugqitywa kuphela ukuba banxibelelanisa ibhalansi yakho yebhanki kuyo yonke le nto. Brrrr .. Kungekudala akusayi kubaleki ngaphandle kokuba ukhetha ukuhlala 'endle', kodwa bye ..
Singakhwaza esikufunayo; singakhwaza sithi asiyifuni yonke loo nto, kodwa kufana nesikhalo entlango. Uninzi luxhomekeke 'kwinkqubo'. Ndicinga ukuba lixesha lokuba ucinge: Ukuba awukwazi ukubetha 'em, Joyina' em.
Ndicinga ukuba kufuneka size nezisombululo zekhonkrithi ezinokuthi nazo zivuthwe ngabo basebenzela 'inkqubo'. Kufuneka size nezisombululo ezibambekayo nezinokwenzeka eziqinisekisa ukuba abantu abaphulukani nezinto ezithile, kodwa banelizwi. Ngoku sixhomekeke ngokupheleleyo kwizigqibo ezimiselweyo ezivela phezulu. Inkqubo yangoku yezopolitiko isinyanzela ukuba samkele ezo zigqibo ngaphandle kokuthatha inxaxheba. Ndicinga ukuba inokwenziwa ngokwahlukileyo. Inene kufuneka itshintshe ngoku. Kuyandicaphukisa ngokwenene.
Ndifunde malunga nethuba lokujika izinto ngokulula ngeteknoloji efanayo ngeli xesha, ngaphandle koku kujikisa lonke uluntu phantsi. Ayifuni imvukelo okanye uguquko olukhulu oludumileyo. Wonke umntu unokuqhubeka nokwenza oko bakwenzayo. Ndingathanda ukwazi ukuba ucinga ntoni ngayo, kuba ndihlala ndixabisa umbono wakho.
Into kuphela etshintshileyo sisigqibo sesigqibo. Abaphathiswa kunye namagosa ngoku enza ingxelo kwisithsaba kwaye atyhalela phambili nemithetho ngaphandle kwemvume yabantu kwangoko kufuneka anike ingxelo ebantwini. Abaphathiswa kufuneka bathathelwe indawo ngabameli abonyulwe ngokuthe ngqo ebantwini (ababamela ngokwenyani abantu endaweni yesithsaba). Bayibiza ngokuba yintando yesininzi ngqo. Oko kukhuthazwe ngu-Elon Musk (wezo moto zeTesla). Ayisiyo inkwenkwe esisidenge…
Ukuba oko kunokwenzeka ngentando yesininzi ethe ngqo kwaye ukuba inokuziswa ngokukhawuleza, ndicinga ukuba kufanele ukuba siqale ukwenza loo nto kwaye siyikhuthaze. Kwidemokhrasi ethe ngqo enjalo, abantu banyula abameli babantu kwi-intanethi. Ke unokuba ngumgqatswa ngokwakho okanye ubanike abagqatswa kwaye inkqubo yokuvota iqinisekisa ukukhethwa nokukhula kwenkxaso. Into encinci njengeenkqubo zokuvota njengeTalente yeHolland enayo kunye nezinye iinkqubo zeTV. Itekhnoloji ikhona. Into endiyiqondayo kukuba kunokwenzeka.
Ke abameli abonyulwe ngokuthe ngqo kufuneka benze lula imithetho kwaye bayizise ebantwini ukuze yamkelwe okanye iphononongwe. Ukusuka kumawaka emithetho, ukucaciselwa, ukusuka kubungakanani ukuya kumgangatho. Uthatho-nxaxheba loluntu ngokuthe ngqo. Ndicinga ukuba inobulumko.
Sinokulinda kude kube yimithetho yokuthintela abagunyazisiweyo esivumela ukuba sikhethe ngokuthatha iyeza okanye siye entolongweni yedijithali okanye sinokubamba umzuzwana. Ndicinga ukuba kufuneka sisebenzise eli thuba ukwenza le nguqu yenziwe. Guqula indlela esifuna ngayo! Idemokhrasi ethe ngqo inokuthi ithathe indawo yamandla ekhoyo ngenkqubo yokuvota kwi-Intanethi kwiinyanga ezimbalwa. Well: Ekugqibeleni into ekhonkrithi endaweni yazo zonke ezo ngcinga uboya kulo lonke intanethi.
Ndifuna ngokwenene ukwazi ukuba ucinga ntoni ngayo! Ndicinga ukuba ngoku lixesha lokuba nenze inkxaso yoku. Makhe sithethe ngaloo nto ngokobuqu. Singayakha njengoko sonke sasisenza Facebook likhulu. Ukwenza oko ngokwabelana ... ngokubonisa abantu abakungqongileyo. Yiyo loo nto ndicinge ukuba ndiza kunxibelelana nawe.
Jonga apha, icacisiwe kakuhle apho: https://www.fvvd.nl/ kwaye ungasayina ngokukhawuleza uxwebhu lwezikhalazo olubonisa ukuba ngokwenene sifuna ukwenza oku kunye. Oko kuya kuhamba yintsholongwane kuphela ukuba undibuza.
Ewe, ndiyayiva kuwe.
(PS mhlawumbi umbono: thumela le imeyile kwabanye abahlobo bethu)
Mininzi imibuzo malunga nokuba le nkqubo yezopolitiko iza kusebenza njani, kodwa eyona nto iphambili yile:
ukuba inokuphunyezwa ngokukhawuleza
ukuba lolona hlobo lolawulo lwentando yesininzi
ukuba ungenza inkqubo yezezimali iqinile kwakhona
Okokugqibela kunokwenziwa, umzekelo, ngokwazisa kwidijithali (kwaye mhlawumbi nephepha) lesiginali. Elo gumbi ke ligutyungelwa ngumgangatho lowo ukuncipha okwangoku kwemali Iifowni. Ikhonkco lakha "umgangatho wegolide" omtsha. Oko kunokuba yigolide yomzimba okanye inokuba yibitcoin. Unokwenza ngokukhawuleza imali zedijithali kunye nekhonkco kunye ne-bitcoin (njengoko "umgangatho wegolide") nayo imiselwe ngokukhawuleza. Oku kulandelayo kuhlala kusebenza kuyo yonke into: abantu bakhetha.
Uninzi luyamisela! Kwaye oko bubuhle beli demokrasi ngqo. Idemokhrasi ethe ngqo ibingazange ibekho ngaphambili, kuba iya kuthatha ixesha elininzi. Ngobugcisa banamhlanje, unganika abantu ngokukhawuleza. Ngesixhobo kunye noshicilelo lweqhosha, uvotela umgqatswa kunye nokushicilelwa iqhosha ngokuvumela okanye ukwala izindululo.
"Ewe, kodwa oko akunakwenzeka, umthetho untsonkothile kakhulu ngenxa yoko kwaye kunemithetho emininzi kakhulu leyo!Ngokuchanekileyo kwaye yile nto kanye ekufuneka itshintshe. Ezi nkokeli zintsha kufuneka ke ngoko zibe nakho ukwenza lula, zinxibelelane ngokucacileyo kunye nabantu. Uninzi luhlala luthatha isigqibo.
Yiyeke, icinge ngayo, kodwa ungayithathi ixesha elide. Kufuneka siphume ngokukhawuleza kule meko sikuyo ngoku kwaye kufuneka sifumane abantu abasilawulayo ngoku ngaphandle kwesakhiwo. Funda ngakumbi www.fvdd.nl kwaye ubuze imibuzo yakho phantsi 'kombuzo kunye nempendulo'.
"..Uma ke uthe ukubambisa ngoku, abantwana bakho baza kulandela"
iifoto zomthombo: https://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/
Ngaba kufuneka uthathe okanye uyaliwe iyeza le-Covid-19 ukuba ngaba kunyanzelekile? Kwenziwe ntoni?
Isibophelelo esichasene neMicimbi kaRhulumente u-Jordie Zwarts utshona kwiitoni, kodwa akaphumeleli nto
tags: ntshukumo, wentando, ngqo, ngqo, eziziimbalasane, Forum, I-fvvd. ipati, Amazing, kuluntu, abaphathiswa, online, iqonga, gu qulelo, kuvota
15 Meyi 2020 kwi-15: 27
I-ANP: Ukupasa: I-VVD ikhula kwizitulo ezingama-43 ngokwendlela ye-corona
Abavoti bayayibulela indlela urhulumente abona ngayo urhulumente, ethi ibonelele ngenkxaso kwiqela elikhulu lobumbano, iVVD, ngophando lwamva nje olwenziwe ngu-I&O. Umbutho wenkululeko unokubala izihlalo ezingama-43, ngelixa onke amanye amaqela ebanjwa phantsi kwezihlalo ezili-16.
15 Meyi 2020 kwi-15: 29
I-ANP uJohn de Mol… ipoliyo okanye isasazo esithembakeleyo? Lonke ixesha elininzi lokungqina okuchaseneyo.
15 Meyi 2020 kwi-15: 42
Inkqubo yokuvota ayifanelanga kuthenjwa xa besithi izihlalo ezingama-43 zenza nje ukuba zikwazi ukufumana inani lezihlalo zikwi-43. Uninzi lwabahlali baseMadurodam basakholelwa kwinkqubo yokuvota kunye nebhokisi yokuvota.
Ewe ndingakuxelela kumthombo othembekileyo ukuba kukho ubuqhophololo bebhokisi yokuvota kwaye akukho bhetele kunommandla webhanana ophakathi. I-ANP ikwabandakanyeka ekubaleni iivoti
"Oomasipala badlula kulo lonke ubalo olukhawulezileyo kwi-ANP (Algemeen Nederlands Persbureau). Ngokusekwe kula manani okuvota, i-NOS iya kuzisa iziphumo zokuqala ngorhatya losuku lonyulo. "
"Amagosa kaMasipala ongezela iziphumo zesikhululo sokuvota. Oku bakwenza ngesiseko sengxelo ezisemthethweni zezikhululo zokuvota. Iziphumo zibonisa ngoncedo lwesixhobo sokubala (uninzi lweNkxaso yoSoftware), kwinqanaba lombutho kunye nenqanaba labagqatswa. "
15 Meyi 2020 kwi-15: 55
UJoseph Stalin- 'Abo bavote abenzi nto. Abo babala ivoti bagqiba yonke into. '
15 Meyi 2020 kwi-16: 07
Ndicinga ukuba i-Mol isengumhlobo okanye ubuncinci iqabane kwi-Berlusconi. IiFrame phakathi kwabo, bebonke bazakhela ikamva eliqaqambileyo bona kunye nabazalwana babo, hayi ubuntu.
16 Meyi 2020 kwi-09: 10
I-idd it benne kabbalists, u-Berlusconi waziwa njengelungu lendlu ye-PII eyaziwayo. Kwindawo enye yokulala ebibandakanyeke ekucwangcisweni kwemisebenzi yeGladio e-Italiya eyabulala uninzi lwabantu phantsi komgaqo we "Red Brigades". Bahlala beyazi indlela yokupakisha ngokufanelekileyo kwaye bathengise abarhanelwa abaqhelekileyo.
16 Meyi 2020 kwi-13: 51
IFreemasonry Iphele Umbutho waseNtshona
Uninzi lwabenzi bezigqibo ababalulekileyo baseNtshona, abezopolitiko, oososayensi, kunye namagosa omkhosi angamalungu ebutho elifihlakeleyo okanye achukunyiswe kwaye ahlala alawulwa ngamalungu anje… Esi sakhiwo sinye sobusathana esibufumanayo kwezinye iindawo zokuhlala iFreemasonry, njengePII. Indawo yokuhlala ebibandakanyeka kwiCalvi Affair e-Italy ekuqaleni kweminyaka engamashumi asixhenxe - izinto eziyimfihlo, ukuphinda kabini, ukusetyenziswa gwenxa okungafunekiyo, ukungena kwabantu, urhwaphilizo lwamagosa kwaye, apho kufanelekileyo, kubonakala ngathi, nokubulawa.
22 Meyi 2020 kwi-14: 43
Unyulo?! Yibeke nje kude, iTrollongren iphinde yanayo incasa
IKhabhinethi (vd Koning): ukuhlehliswa kokhetho ngenxa ye-coronavirus akunakukhutshwa
U-Ollongren uthi, "Ukuvota ngencwadi" kukwenzeka ukuba ubonakale '. hahahaha
Kwindlela, funda ingxelo yeNkundla yoPhicotho-zincwadi malunga namakhaya angenayo igesi, yintoni le ingcolileyo eyenziwe nguTrollongren ngayo. Isenokuxabisa into… eyaneleyo imali yerhafu kaMadurodam
Kwindlela yayo yangoku, iNkqubo yeNdawo engasetyenziswanga iRhasi ngeNdalo ayifaki galelo laneleyo kwiinjongo zoMphathiswa Wezangaphakathi kunye nobudlelwane boMbuso (i-BZK) ukwenza iindawo ezingahambelani negesi yendalo. UMphathiswa wezangaphandle kunye nobudlelwane boMbuso uphakamise ulindelo olungenakufezekiswa.
22 Meyi 2020 kwi-17: 16
ndixelele .. iyaqhubeka nje. Ngaphandle kwegesi, ayifanelanga ukuba yinto ehlekisayo leyo?
UMphathiswa u-Ollongren uphanda ibhokisi yokuvota enye kunye nesiqingatha semitha
Ubhubhane we-COVID-19 okwangoku ayisosizathu sokungakwazi ukulungiselela okanye ukuhlehlisa unyulo lwepalamente yowama-2021, kodwa kunokubangela ukuba ibhokisi yokuvota ibonakale yahlukile. UMphathiswa uKajsa Ollongren Wezangaphakathi wabhala kwileta eya ePalamente ngolwe-Sihlanu ukuba uyaphanda lo nto. Oku akusebenzi kunyulo lweNdlu yabaMeli kuphela, kodwa nakunyulo lwebhunga lesiqithi iSt Eustatius kunye neebhokisi ezithile zokuvota zoomasipala eziya kubakho kwisiqingatha sesibini sowama-2020.
ICandelo loMphathiswa Wezangaphakathi liza kwenza imeko yokuba ukhetho lukhangeleka njani na ukuba ibhokisi yokuvota kufuneka ilungisiwe. Oku kunokuba ngumzekelo kulwakhiwo ngokutsha lwezikhululo zokuvota. UMphathiswa u-Ollongren ukwakhankanya ukuba kungenzeka ukuvota ngeleta ukuba ayikho enye indlela. Kule nto wongeza ukuba imfihlo kunye nenkululeko yokuvota ayinakukhuseleka kunye nokuvota okuqhelekileyo kwindawo.
15 Meyi 2020 kwi-19: 08
Ukuba ufuna ukuba yinkokeli yeqela elikhulu, wenza oko ngaphandle kwenzala hayi (yedijithali) yemali. Nje ukuba imali ivele, izinto zihamba gwenxa. Oorhulumente bangoku benza ngathi abafumani mali ingako, kodwa ngomnyango ongasemva bali ibali elihlukileyo ngokupheleleyo.
Ukunika abantu imali yasimahla akuyi kunceda nakuphi na, imali inika amandla apho ixesha lichithwe khona. Njengabalandeli abancinci baya kukhwaza ngakumbi.
Yonke into ekwindalo iphela ikhula simahla kwaye nemithetho yendalo iyafana kumntu wonke. Uninzi lwabantu kunye neenkokheli zabo bayithathile le mithetho ngemithetho ye-ego.
Wonke umntu okweli lizwe unelungelo lokuba nelakhe kwaye alime umhlaba. Kuya kubakho ukutya okuninzi kangangokuba kuninzi kwaye akukho mntu uya kulamba.
Akukho hlathi kufuneka lunqunyulwe ukuze kuhliswe uqoqosho. Ukuba ufuna ukuya kwelinye ilizwe, wenza isivumelwano sokutshintshiselana okwethutyana. Ukukhula koqoqosho kuninzi, ukukhula koqoqosho kukuzingca.
Kuyinomdla kuwo wonke umntu ukuba oku kuqhubeke ukusebenza kuba siyazi ukuba kuya kwenzeka ntoni ukuba siyawuyeka.
Owu shit yenzekile ngaphambili 😉
15 Meyi 2020 kwi-20: 10
Ndicinga ukuba luluvo oluhle kangaka. Nceda uyixhase ngentliziyo iphela.
Ngaba awukwazi ukufaka le nkqubo yolawulo lwentando yesininzi ngokuthe ngqo kwiireferendamu?
Kwaye ungaqiniseka njani ukuba le nkqubo inokuthenjwa kwaye ayisebenzi?
Andikhathalelanga imali yedijithali okanye ukuqhubeka koluntu ngokubanzi.
Ngaba le nkqubo inokusetyenziswa nangakumbi ngendlela "ye-analogous"?
16 Meyi 2020 kwi-21: 57
Lonke uqwalaselo olulungileyo nolubalulekileyo kwizimvo. Nangona kunjalo, ngaba kukhona ukuphendula okanye ileta njengoko ibhaliwe kweli nqaku kwaye sele ileta sele ikhutshiwe kwaye yathunyelwa kwabanye? Ukuba unazo naziphi na ezinye iingcebiso okanye ngokubhekisele kule leta okanye ukufikelela kwiqela ekujolise kulo, ungathandabuzi ukuyabelana. Lo ngumsebenzi omncinci, kwaye njengoko intsholongwane isasazeka kakhulu, lo myalezo ukwasasazeka kakhulu. Iimpendulo ezininzi kwezinye iindawo (ezilawulwayo indawo zokubonisa) zibonisa ukuba iimvakalelo zesisu zabaninzi zifuna utshintsho. Ke ngoku lixesha lokuthimba eli qela kwezinye iziteshi. Ukukhuphela ileta kunye nokusasaza kunye nombuzo ukuze wabelane ngakumbi ngenye indlela. Kwangokunjalo, "elinye iphephandaba" lasasazwa ngoSuku lweNkululeko, eyayikhe yashicilelwa. Ndiyathemba ukuba abantu abayi-930 abasayine uxwebhu lwezikhalazo bakhuphele le leta kwaye bayidlulisela kwabanye.
16 Meyi 2020 kwi-23: 06
Vuma, ngoku lixesha lokuba uthathe inyathelo kwaye ulikhuthaze ngokusebenzayo. Asiphumi koku ngokuphendula kumanqaku, kodwa ngokukhuthaza abantu ngokwenene.
16 Meyi 2020 kwi-22: 11
Yibeke apha nje, uhleli kunye nefuthe lakho lwe-chimeric, kodwa sele uyayazi loo nto.
I-Coronavirus Vaccine Patent https://patents.justia.com/patent/10130701 ye-Attenuated Coronavirus ukuba isetyenziswe njengezitofu. Ipatent yeChimera Protein https://patents.justia.com/patent/8828407 Intloko yeNgonyama yeChimera, umzimba webhokhwe, umsila wedrako "She-Goat" ngokoqobo lithetha "IXesha lasebusika" aka Capricornus i-Goordanan Goat yasebusika; I-Chimera sisilwanyana esibulalayo esenziwe kwezinye izilwanyana, ichanekile isifo.
Ngapha koko, iGileyadi iyinto ebhalwe ngesiHebhere kwakhona. Kubonakala ngathi kuthetha okulandelayo.
IGileyadi (ngumyili wembuyekezo, ichiza likaTrump lokugonya lifuna ukufunyanwa zizigidi ezingama-300 ezomkhosi. Ke ukuloo ndawo, kuba akukho nto ihlolwe kuyo nantoni na, kwaye ngokuqinisekileyo ayenzelwanga ngeyona njongo. Bona igama lenkampani. Iguqulelwe nguGoogle kunye nokubhekisa apha ngezantsi.
Imfumba yengqina i-chaldee igama elilingana neGaleed ngesiHebhere. Zombini eziphawula imeko yokudibana phakathi kukaYakobi noLabhan. Gen 31:47 (ayikokucebisa abantu ngebhayibhile, kodwa kukutolika)
UPopu uFrancis Encyclical Laudato Si (iphepha lokufundisa) Iingcingo zokubulala abantu ezi-6 zebhiliyoni;
I-induvidual iphathwe ngesandla ngokufika ubuso ngobuso kunye neyelenqe kangangokuba ayiboni ukuba iyakholelwa. ISodomine, iPhedophile, eyi-33 degree Freemason. J Edgar Hoover, umlawuli we-FBI.
Alter kulapho bafuna ukukuthatha, bangatshati.
Ke kulula ukubona ukuba babi kangakanani abo bantu, ukuba unokubabiza.
18 Meyi 2020 kwi-22: 57
Kanye njengokuba u "De Andere Kranr" epapashiwe kwaye wasasazwa njengekopi eprintiweyo eNetherlands, iphepha-ndaba lipapashiwe eJamani apho kufundiswa inkcaso malunga nemilinganiselo yangoku.
Ukusasaza olu hlobo lweendaba ngokuqinisekileyo kuya kunceda abantu abaninzi ukuba bangabi nalo uxinzelelo loontanga abancinci xa bebona iimvakalelo zabo zesisu ziqinisekisiwe ukuya kutsho kwinqanaba elikhulu kunokuba babecinga. Ewe oku kunokuba ngumjelo wokubanjwa kweli qela labantu, kodwa ikho into ephilayo phakathi kweqela labantu abakhulayo. Yiyo loo nto ngoku kufuneka kukhuthazwe inyathelo lentando yesininzi ngqo kwiqela elikhulu labantu. Oku kufuna ukuba wonke umntu ofunde oku akhuphele ileta aze ayithumele kuyo, umzekelo, iidilesi ezili-10 kwisangqa sakho esincinci nombuzo wokuba ngaba bayafuna na ukuyidlulisela ileta. Xa oku kusenzeka iba ukukhula okubonakalayo kolwazi ngotshintsho / olunjengolawulo lwentando yesininzi. Ukuqhelana nelungu linyathelo lokuqala lesenzo sabantu, njengoko uninzi lwabarhwebi luya kungqina.
Uyazi, ukulangazelela ukubuyela kwinto yesiqhelo kwakudala akunakuphinda kwenzeke ngenxa yokuba le nkqubo inike ithuba lokuqhubela phambili uluntu kwimeko ekuyo ngoku. Ke nceda ukhuphe le ngcinga ngaphandle kwengqondo yakho. Inketho ke yeyokwamkela into eqhelekileyo esinokuthi sihlangane kuyo kwaye sifunde kwifowuni okanye samkele enye indlela kwaye ube ngumdanisi inombolo ye-5, 15, 500, 50000 okanye 1 yezigidi zendlela "yokudala intshukumo".
Thatha isenzo esincinci namhlanje kwaye ubone ukuba bangaphi abantu onokufikelela kubo. Yenza oko kwisizukulwana esincinci kunye nabantwana babo kunye nabazukulwana babo elizayo !!! Ke: https://www.fvvd.nl
20 Meyi 2020 kwi-14: 50
Ngubani otyikitya imithetho kunye nemithetho yasebukhosini?
Iziphakamiso zomthetho ezamkelwe yiPalamente kunye neMithetho yasebukhosini zityikityiwe (zisayiniwe) zenziwa nguKumkani kwaye emva koko ziphathiswe ngumphathiswa okanye unobhala wezemali. Emva koko baqala ukusebenza. Isibonakaliso se-contra sibonisa ukuba ayinguye uKumkani kodwa ngumphathiswa (wezopolitiko) onoxanduva
UWilly tog uyenzile kwakhona ...
20 Meyi 2020 kwi-18: 54
Ngokuchanekileyo, ukuba bababene ngobulumko kakhulu kumgaqo-siseko, bacetyiswa ngabafana abafanayo.
Bayadingana kwaye basebenza kunye, kodwa abantu abaqhelekileyo abaxelelwa loo nto ngokuqinisekileyo. Banolwalamano olomeleleyo olukhethekileyo kunye nomnye.
Apho ikhoyo, enye ikho. Sisemnandi njengokumkani ukungabhatali irhafu, ukuxabisa imali kunye namandla, kunye nomsebenzi wakho owuzwe njengelifa. Akukho sidingo sokufaka isicelo ukuze abagqatswa abangcono bangangali thuba. Iya kuthi kwakhona ikhuthazwe ukuba ithathe isigqibo malunga nokuqeshwa apho abonyuli benokwenzela iarhente yakhe, bakwinkonzo kuye. ngubani olawula inkosi kwimeko enjalo? Yiyo loo nto uninzi lwabalandeli beorenji. Ewe kuyahlawula ukuba yintshi yeorenji. I-orenji ibisakuba yeqela lezopolitiko nabo bakwenzileyo ngobuchule ukuba inkosi ingakhethi buso. Nokuba kunjalo? . Inkqubo ye-Feudal kwinkulungwane yama-21. Hlukana nayo. Sayina uxwebhu lwezikhalazo ngoku!
Ukusongelwa ngebhombu wabhala wathi:
20 Meyi 2020 kwi-21: 05
Ewe, le iya kuba yindlela ekhawulezayo yokungenelela- ukuba abaxhasi abaneleyo bafumaneka. Kwaye ndicinga ukuba kuthatha okungaphezulu kwenjongo echaziweyo yesikhalazo.
Inyani yile yokuba oku kusekwe kwinkangeleko yesigqibo sokusebenzisana. Ngayiphi na imeko, idemokhrasi ihlala icinezela abambalwa abangafumani "indlela" yabo. Ukongeza, idemokhrasi ethe ngqo iyingozi nokuba imidiya ingathabathi cala. Kwaye le yokugqibela ayisiyiyo kwaphela eNetherlands.
Umzekeliso wendlela izinto ezihamba ngayo ungabonakala kumanqaku athi "I-Orville" ixesha loku-1 isiqendu 7. Ukuthi “umjelo ophambili” akuthethi ukuba awunakuba nomyalezo olungileyo…
Nam, ndiyathandabuza ukuba umatshini wamandla uya kusebenzisana nokuba kuvotwe ngokwaneleyo, kodwa kulungile. Ngokuqinisekileyo ukudubula akulunganga. Okwangoku, kuvakala kuyinto engaqhelekanga ukusayina uxwebhu lwezikhalazo. Sisoluvo lokuba uyakuqonda ukuba abantu banamandla phezu kwakho kwaye awukwazi kwenza nto ngaphandle kwabo. Ukuba uyakuvuma oko, kutheni abantu beya kusabela kwisikhalazo sakho… ..
20 Meyi 2020 kwi-22: 26
Uxwebhu lwezikhalazo aluyonto ngaphandle kovavanyo lokuba bangaphi abantu abazimiseleyo ukuqala kwaye babonise ukuzibophelela kwabo. Ngokuqinisekileyo inikezelwe kwi-neiamdn kwezopolitiko zangoku, kodwa ukusayina okwaneleyo luphawu: "Kwaye ngoku siyahamba" ukuya kwicala lezopolitiko.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile, ewe, kukuphinda uqalise ukuphinda uyiqwalasele kwakhona into esetubini. Obo buqili kuba uthatha ubukhoboka babantu ngexesha elinye, kodwa ngoku okanye akunakuze kubonwe ukuba bangaphi abantu abazimiseleyo ukuya ezantsi ukuba batshintshe.
Ungayithintela ukuba ingahambi. Umzekelo: ugonyo olunyanzelekileyo. Masithi isininzi sifuna ukugonywa okunyanzelekileyo ngenxa yokuba bephenjelelwe yimithombo yeendaba kwaye sele bekholelwe ukuba kulungile. Lo mthetho uyahambelana nomgaqo-siseko. Loo mgaqo-siseko unemithetho esisiseko esekwe kwinkululeko nelungelo lokuzikhethela. Akumele ke (okwenzekayo nomthetho okhoyo ngoku) uphumeze umthetho ojongela phantsi okanye uzama ukuthintela umgaqo-siseko (ngokusekwe kwilungelo lomntu elisisiseko).
20 Meyi 2020 kwi-22: 44
Kulabo bafunda kunye kwaye bafuna ngokwenene utshintsho kubantwana bethu kunye nabantwana babo. Sele usityikitye isicelo, kodwa oko akuthethi lutshintsho. Ngaba uzimisele ukwenza into kwaye ungabelani nje ngamanqaku kunye nevidiyo ezingaphezulu okanye ezingaphantsi nje kobungqina boko sele kwaziwa. Ngaba kunokwenzeka ukuba unike "intshukumo" enye into engaphezulu ngokwenza, umzekelo, ukuseka incoko yevidiyo apho izinto zinokuxoxwa kwangoko kwaye apho, umzekelo, sahlulahlula imisebenzi ukwenza izinto ezizakubangela utshintsho lokwenyani. Okanye ngaba zikho ezinye iingcebiso zokufikelela kwiqela ekujoliso kulo. Baninzi abantu abanesibindi (kubandakanya uMartin) ababoniswe kwiividiyo abanazo ii-guts zokubiza izinto. Lixesha lokuba sizililongele abo bantu kwaye sithathe i-gauntlet. Bakufanele ukuxhaswa kwaye oko kufuna ukushiya isimo sengqondo sokuphelela. Ke ndicebisa ukwenza ividiyo yencoko, kodwa imibuzo ye-z2:
* abazimisele ukuthatha inxaxheba
* zikho ezinye iingcebiso
Siza kufunda ukuba zithini iimpendulo
20 Meyi 2020 kwi-23: 03
Ndiyathemba ukuba abantu bazakulithatha inyathelo lokuqala. Incoko yevidiyo inokuba yinto engenakwenzeka, kuba kuya kufuneka ukuba ubekho kwi-Intanethi ngexesha elifanayo, kodwa ungadala intshukumo ngokuma ngokwakho kwaye wenze ingxelo ecacileyo. Unokwenza ividiyo kwaye uyithumele apha. Kwaye emva koko asiphendukeli kumkhosi wemidiya wezentlalo (okwabizwa ngokuba yi 'troll umkhosi'). Yiza nezimvo kwaye ikakhulu isenzo zekhonkrithi.
Isiqalo esibalulekileyo iya kubakho ukuba abantu baqala ukwabelana ngewebhusayithi kwaye bazame ngokwenene ukukholisa abanye.
21 Meyi 2020 kwi-09: 01
Izandi ezimnandi, asizizo iintshaba zabantu njengoko zichaziwe phantsi kolawulo lukaStalin.
“Singabantu” abantu. Ke masingahambi siye kwi gulag kwaye singoyiki kuyo, sikunye nabantu ababantu
Iphinde icokiswe kakhulu kukuba ungumntu ozonda umntu ukuba awufuni ukunxiba imask, kwakhona phantsi kobutshaba boluntu, baye bacinga ngayo emva koko phantsi kukaStalin nangoku kwinqanaba lomhlaba. Ndiyathemba ukuba abantu beza namalinge. Uya kubafumana ngokuchasene nabo ngoko ke okokuqala yazisa ukwazisa, imiboniso yeendaba njlnjl., Kufuneka nevoti yam
Umntu owenza abantu bazi ukuba ayilulo utshaba lwabantu, kodwa "ngumhlobo wabantu", hayi ngokwe Gulag
21 Meyi 2020 kwi-15: 05
Abanye babafundi banikezela ngeziphakamiso zokufikelela kubaphulaphuli abakhulu okanye imizekelo yemisebenzi enokuphindwa ukwandisa abaphulaphuli. Kwakhona, ukwabelana ngeziphumo kwi-intanethi akunagalelo ekufezekiseni iinjongo zedemokhrasi ngqo. Umzekelo, ndibhekisa kwiziza endizityelela rhoqo http://www.fvvd.nl Ngaba bakhona abangakumbi abakwenzayo oku? Kukho abafundi abazibandakanya nemisebenzi engaphandle kwe-Intanethi ukukhuthaza ulwazi malunga nentando yesininzi ngqo kunye nendawo enxulumene nayo. Ukuba kunjalo, wabelane kwaye abanye banokuthatha indawo. Ndiyabona ukuba inani labantu abatyikitye ali-1181 (enkosi ngaphambili ngeli nyathelo) kwaye loo nto ngokuqinisekileyo kufuneka iphindaphindwe amaxesha amaninzi. Njengoko bendibhale ngaphambili, ngoku lixesha lokuba ukhuseleko loontanga luyhla. Abantu baneemvakalelo zesisu kwaye bafuna enye indlela. Ngaba ukhona umntu ozikhumbulayo iingqushu zikaLance Armstrong? I-Zoiest ikwabanjwa amaxesha amaninzi ngaphezulu kunokuba bekuqikelelwe ngaphambili. Ubumnandi buya kuba sisiphakamiso, kodwa ndiqinisekile ukuba phakathi kwabantu abayi-1100 abatyikitye ngokuqinisekileyo kukho izimvo ezingcono. Abanye mabayive.
bertusjanssen wabhala wathi:
21 Meyi 2020 kwi-15: 06
Uyayazi into eyenzekileyo kwi-al-Qadhafi? Beka eyakho imali kwaye izezona zifikelelweyo ngabantu abanengcinga, ukoyisa abantu ukuba babanike umhlaba oqinileyo ngokuchaza ukuba indlu bahlala kuyo yipropathi yabo yiba okanye uyihlabe kwaye ungabhengezi tyala ngaphandle kwamatyala.Ndikhutshiwe FB kwaye kufanele ukuba kubekho, impumelelo nenkampani.
« Isibophelelo esichasene neMicimbi kaRhulumente u-Jordie Zwarts utshona kwiitoni, kodwa akaphumeleli nto
Ngaba ubunzima bukaTrump besiya e-China ukuqala kokuwa kweedola kunye nokuwa kwezoqoqosho? »
Utyelelo lulonke: 2.492.987